Umsebenzi Wokuzibandakanya - I-MH Thread - I-Ningbo MH Thread Co, Ltd.
Njengomsebenzi owaziwayo wezingubo zebhizinisi, i-MH ibilokhu yenza ukukhiqiza okuluhlaza okwenziwe iminyaka eyi-16, futhi yenza ukucwaninga indlela yokunciphisa inqubo yokukhiqiza yokukhishwa okungcolile, ibeke imali yokwakha ukwelashwa kwamanzi okuthuthwa kwamanzi, ukuqinisekisa ukuthi amanzi angcolile amakhemikhali kanye nokuqothula konke ahlangabezane nemigomo yemvelo . Ku-2015 MH nayo yaqala ukugaya ama-dope, i-polyester evuselelwe kabusha, i-polationter eguquguqukayo ye-cationic, ne-Better-Cotton-Initiative emine uchungechunge lwezinto zokwenza izinto eziphilayo eziluhlaza okwesibhakabhaka, kusukela ezintweni zokusetshenziswa ukuze kusetshenziswe ukukhiqiza okuluhlaza.
UMH usungule isikhwama se- "Xiao dou ya" Scholarship ukuze kusize izingane ezisendaweni empofu ukuba ziqede isifundo sabo. I-MH ixhaswe izingane ezingenamsoco ze-7 iminyaka eyishumi.
Njalo ehlobo, izisebenzi zokuvolontiya ze-Mh zizothumela isipho sokupholisa abasebenzi bezokuthuthwa kwendle kanye namaphoyisa omgwaqo.MH isekela "umsebenzi wokugqoka" futhi unikele ngezigqoko ze-10,000pcs emadolobheni ampofu eGuizhou, Yunnan nakwezinye izindawo ezihluphekile.
I-MH inezikhwama ezikhethekile zokusekela imisebenzi yamasiko, njengengxenye yonyaka, umsebenzi wokwakha wethimba, ukuvakasha kwabasebenzi, njll. Mh uneqembu lebhola lebhola lebhola lebhola lezinyawo, iqembu lebhola lebhola lezinyawo, ibhola lokugibela ngaphandle, iqembu lezithombe, nabanye, iqembu eliyisishiyagalombili, elikhululekile le-MH abasebenzi ukuba babe nokuphila okunempilo.